Ithegi: iplanethi ekrelekrele | Martech Zone
Ithegi: iplanethi enobukrelekrele
NgoLwesibini, Matshi 3, 2015 NgoLwesihlanu, Novemba 17, 2017 Douglas Karr
Ukunxibelelana kwe-Intanethi kuya kuba yinto yokwenene kuso nasiphi na isixhobo. Oku kuya kudlala indima enkulu kwidatha enkulu kunye nentengiso kwikamva lethu elikufutshane. UGartner uqikelele ukuba ngo-2020 kuya kubakho izixhobo ezingaphezulu kwe-26 yezigidigidi ezixhumeke kwi-Intanethi. ] = [op0-9y6q1 Yintoni i-Intanethi yeZinto zeZinto ibhekisa kwizinto esingazicingi njengokuqhagamshelwa. Izinto zinokuba ngamakhaya, izixhobo, izixhobo, izithuthi, okanye abantu. Abantu baya kuthanda